Ingabe Ukuhambisana Kusho Ukuhlala Ekhaya? | Martech Zone
ULwesine, May 31, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngiyawuthanda umculo, kepha angikaze ngiye ekhonsathini eminyakeni edlule.
Ngiyayithanda imidlalo, kepha angikadlali eminyakeni (futhi ibhande lami seliqala ukuyikhombisa).
Ngithanda ukudla okumnandi, kepha ngidla udoti.
Ngiyayithanda imidlalo yaseshashalazini, kepha angikaze ngiwubone umdlalo selokhu ngahlala eDenver.
Ngiyakuthanda ukuphuma ngiye kobhiya, kepha ngiphume izikhathi ezimbalwa kuphela ngonyaka odlule.
Ngiyawathanda ama-movie, kepha kuyaqabukela ngiya.
Ngiyakuzonda ukuzivocavoca umzimba, ngakho-ke ngisebenza okungapheli. Futhi kuyakhombisa!
Ngenkathi ehlangana nosomabhizinisi abambalwa bendawo, omunye wabo wakhuluma ngokuthi luqabula kanjani usuku lwakhe - uvuka ekuseni kakhulu namabhayisikili amamayela angama-20 +. Ngangivame ukugibela kakhulu… ngiyalithanda ibhayisikili (yize ngingaqiniseki ukuthi uLa-Z-Boy wenza isihlalo sebhayisikili). Sancokola ukuthi sidinga ngempela indlela yokwakha ikhompyutha enamaphedali. Qagela ukuthi yini, kukhona okufana nalokho! UTony Little iphezulu kwayo ne-PC Gamer Bike! Lokho akuyona impendulo empeleni, akunjalo? Letha ukuzivocavoca kwami ​​emsebenzini wami ngoba umsebenzi wami udla impilo yami? Angicabangi.
Kamuva namhlanje, bengikhuluma naye Julie futhi uJulie waqala ukukhuluma ngazo zonke izindawo ezazidume kakhulu ezindaweni zomculo, ubuciko, nobumnandi. Ngiza neminyaka emi-5 e-Indianapolis futhi nganginamahloni ngokuphelele ngokuthi angizange ngithole noma yiziphi zezinto ezinhle ayenazo. Njengoba uJulie ayehla ohlwini ... Ama-Yat's, EWhite River State Park, e-Eagle Creek, eVerizon Ampitheatre, e-Eiteljorg Museum, e-Indianapolis Zoo, e-Indiana State Museum, nakwethoni ngaphezulu… bengingakaze ngiye kunoma iyiphi. Ngiye eMnyuziyamu Wezingane, imidlalo ethile ye-AAA Indian ye-baseball, imidlalo embalwa yamaPacers nemidlalo embalwa yamaColts… kodwa kuphelele lapho.
Kumishini yami yokwakha ibhulogi enhle kakhulu futhi ngibe uchwepheshe omkhulu wezobuchwepheshe, ngiye ngazinaka impela zona kanye izinto engizithanda kakhulu! Sekuyiminyaka engu-5 manje nginikeze abaqashi bami izinsuku zami, ubusuku nobusuku kanye nezimpelasonto - futhi ngasebenza kubhulogi lami phakathi. Alukho usuku oludlulayo nginomuntu emsebenzini noma kunethiwekhi yami ongifunela usizo, futhi ngiyakuthanda ukulunikeza. Cishe angikaze ngithi cha. Njengoba ngibhala lokhu okuthunyelwe, ngasiza umngane omncane wamadodana ami ukusetha i-database ye-MySQL kusistimu yakhe esebenzisa I-XAMPP. Ngibheke phambili ekumsizeni kakhulu ngonyaka ozayo - ungicelile ukuba ngibe ngumeluleki wakhe wephrojekthi yakhe enkulu yokwakha uhlelo lwewebhu.
Ngincome wonke umuntu ongizungezile ukuthi yingakho ngilapha futhi yilokho engikulungele khona. Akuvamile ukuthi umcimbi wenzeke lapho ngicabanga ukuthi ngisetshenziswa khona. Kuzoba yimpi ekhuphukayo ukushintsha okulindelwe ngabantu kimi. Ngifuna ukuqhubeka nokusiza lapho kudingeka khona, kodwa hhayi ngokulimaza impilo yami yangasese.
Ngenkathi ngiphume eSan Jose ngonyaka owedlule, ngangihlabeke umxhwele kakhulu ngendlela umkhakha wezobuchwepheshe ogcina ngayo ukusebenza komphakathi. Nganoma yibuphi ubusuku obunikeziwe, kwakukhona imibuthano kulo lonke idolobha. Ngilalele lapho abantu bekhuluma ngendawo abasanda kuyishiya, noma ngithi sawubona kothile abake bambona emasontweni ambalwa edlule komunye umcimbi. Abantu abaningi baya embukisweni, ezindaweni zokudlela, noma eminye imicimbi ndawonye. I-Indianapolis, ngokwazi kwami, ishoda nge 'tech night-life'. Ngiyazi ukuthi sinamaqembu wabasebenzisi be-SQL, .NET namaFlex lapha endaweni kepha lawa angama-yawnathons. Isigejane sabantu abahleli ekamelweni babuka iPowerpoint embi (ngingomunye walabo bafana… bengilokhu ngifaka i-Intro yami ku-Powerpoint yokubloga emasontweni ambalwa edlule) anginandaba nami.
Okuseduze kakhulu ukuthi ngijabule ukuya kwi-Indianapolis Book Club. Ukuqothuka okungcwele, kumele ngibe neminyaka engama-80 ubudala! Ukugqama kokuxhumana kwami ​​nabantu (okwangempela, hhayi okubonakalayo) yi-freakin 'Book Club? Abangane bami abahle uBill noCarla balungiselela ukuhamba ngomkhumbi oya eYurophu, futhi ngizama ukuthola okunye ukufunda. "UMhlaba uye eDoug… lokhu akusebenzi!".
Abantu basekhaya babuza ukuthi ngihambisana kanjani nobuchwepheshe njengoba ngenza. Kulungile? Ngicabanga ukuthi sekucaca ukuthi ngikufeza kanjani lokho, akunjalo? Ngikushaya indiva ngokuphelele konke okunye empilweni yami. Ngingaba nehhovisi ngokoqobo e-Aniak, e-Alaska, futhi ngiphile ngendlela efanayo. Ngakho-ke - nangu umbuzo wezigidi zamadola:
Ungakuthathi lokhu njengokuthunyelwe 'ngimpofu' - kuphambene impela. Ngizibekela imigomo kanye ne-blog yami futhi ngiyifinyelela ngempumelelo. Angiqiniseki nje ukuthi ngibeka imigomo enempilo kakhulu! Isikhathi soshintsho oluthile.
Ngiyakwazi ukuqhubeka ngingahlali ekhaya. Ngizoqala ukusebenza ngalokho ngokushesha. Anginxephezelwanga ubusuku nezimpelasonto ngakho ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi ngiyeke ukubanikela mahhala. Ayisekho i-imeyili, akusekho imibhalo. Ngiya embukisweni! Ngizogibela nebhayisikili lami (elimile) ekuseni. Futhi kusasa ngiphuma emsebenzini ekuseni ngiyochitha isikhathi nendodakazi yami! Futhi… mhlawumbe usuku noma ezimbili kuseduze.
Ngibonga uJulie ngombono walokhu okuthunyelwe !!!
May 31, 2007 ku-11: 01 PM
Ngiyabonga futhi ngalo lonke usizo onginike lona. Kuyancomeka kakhulu. Ngicabanga ukuthi ngibe nenhlanhla yokuthola umuntu endaweni yangakini onganikeza ukuqonda okuningi njengawe.
Ngibheke phambili nakunyaka ozayo; noma kunjalo, ohlwini lwamaphrojekthi angamukeleki kuphrojekthi ephezulu yonyaka ozayo wenza iwebhusayithi. Angiqiniseki ngo-100% uma lokhu kuzofaka engihlela ukukwenza, kepha angithembi.
Okokugcina, ngiyabonga ngokuba yi-blogger ezinikele. Njengoba wazi, ngifunda ibhulogi yakho nsuku zonke, futhi sekungumthombo wami oyinhloko wokuqondisa.
May 31, 2007 ku-11: 20 PM
Ungumfundi omuhle. Ngiyayithanda imizamo oyifaka kakhulu ngaphambi ungithinta… kukhombisa ukuzimisela okukhulu.
Futhi wamukelekile kakhulu! Ngibheke phambili ekuboneni lokho oza nakho. Uyazi, ngahlangana nengane eyakhula Kuyenzeka futhi wayeyintanga yakho. Anginakungabaza ukuthi uzobe ungaphezu kwamandla ami ngokushesha!
May 31, 2007 ku-11: 31 PM
Lokho kungaba kuhle ngomqondo wokuzithuthukisa, kepha lapho-ke bengingeke ngibe khona noyedwa ozoya kosizo. Haha. Inqobo nje uma uhlala njalo ukhona ukuze uthole umbono wesibili.
May 31, 2007 ku-10: 05 PM
Ngihlale lapha imizuzu eyi-10-15 enhle ngifaka konke okubhalile. Ndoda, lokhu okuthunyelwe okujulile kepha kugcwele ukwethembeka futhi kuyashukumisela endodeni engemva kwebhulogi.
Ngifana nawe Doug ngokubeka cishe sonke isikhathi sami sokuvuka kanye nesikhathi esisodwa sokuvula isikhathi emsebenzini namaphrojekthi.
Okuthile engikufunde isikhashana esedlule kuyinto oyisho lapha kokuthunyelwe kwakho. Ama-geek njengathi adinga ukusukuma ahambe ashiye ikhompyutha isikhashana.
Manje angisho ukuthi ngihamba ngebhayisikili amamayela angama-20 njengomngani wakho kepha ngiyazama futhi ngisuke kukhompyutha izikhathi ezimbalwa ngosuku ukuze ngihambe kancane. Kuyasiza ukwelula imilenze yami nasemhlane futhi kuyenzeka ligijime igazi.
Ngincoma kakhulu ukuthi uzame into efanayo, noma ngabe uhamba kancane emgwaqeni nasemuva. Konke okuncane kuyasiza.
Ngokuqondene nempilo yakho yangasese, lokho kupholile impela mayelana nokuthi usuku noma ezimbili seziseduze, vele uqiniseke ukuthi akayona i-geek futhi ngiqonde ukuthi ngendlela engcono kakhulu, shiya iPocketPC yakho ekhaya noma ucishe izaziso.
Nikeza usuku lwakho ukunaka okugcwele ongakwenza kuphrojekthi yokufaka amakhodi.
Ikusasa lakho libonakala liqhakazile uDoug. Sonke kufanele sibhekane nezikhathi ezinzima nezimbi empilweni nasemsebenzini. Kwakha isimilo nomfana sinakho okunye kwalokho 🙂
Sikufisela inhlanhla empilweni, othandweni nasemsebenzini. Ngisho lokho ngokusuka enhliziyweni uDoug.
Ngiyajabula ukuthi sesingabangani, ngisho nasezimeni nasezikhathini, lokho okungasibulali kusenza siqine ngokwengeziwe…
May 31, 2007 ku-10: 11 PM
Zonke izinto ezinhle ngokulinganisela. Kusho uNuff.
Futhi ngithobekile ukuthi ngafaka inyosi ebhonetini lakho ukuze isuke izijabulise. Kukhona ngempela okuningi okuhle nge-Indy! Abantu bakuleli dolobha bayamangalisa futhi umhlaba wethu ubungaba yindawo engcono uma sonke besingajabulela indawo okuyo. Ukushintsha umhlaba kuqala ngokushintsha umhlaba WAKHO.
May 31, 2007 ku-10: 20 PM
@Julie: Bengingazi ukuthi uDoug ugqoke ibhonethi 🙂
Siyabonga ngokusiza kukaDoug ukuthi azimisele ukuzithathela yena. Kuhle lokho.
Ngiyavuma u-100%, zonke izinto ezinhle ngokulinganisela.
Manje, uma singathola isithombe sikaDoug egqoke ibhonethi, usuku lwami luzobe luphelele… hehe.
May 31, 2007 ku-11: 02 PM
I-LOL. Ngizosebenza kuleyo pic. Nginesiqiniseko sokuthi abanye babangane bami bezingcweti zemidwebo abanamakhono e-mad Photoshop bangangisiza uma uDK engeke abambe iqhaza ngokuzithandela. Manje, ngivele ngabona ukuthi ngenkulumo ethi “bee enebhonethi” ngiyidedele ngokuphelele ikati esikhwameni ukuthi ngiyigalagi elizweni ngizenza intombazane yasedolobheni kule ndawo enhle.
May 31, 2007 ku-11: 21 PM
Izithombe zami ezinamabhonethi zacekelwa phansi kudala, ngaphambi kwezinsuku zewebhu.
May 31, 2007 ku-11: 05 PM
Iposi elihle uDoug …… futhi sicela uqiniseke ukuthi uhlala kude neTreadputer 🙂
May 31, 2007 ku-11: 23 PM
ICycleputer iyaphuma futhi kungadingeka ukuthi sikhulume! Kunomuntu wasekhaya lapha onendawo emile enesibonisi esiyiphaneli esiyi-6… Ngabona isithombe kanye ephephandabeni kanye. Ubuye abe nonjiniyela wezinhlelo zakhe ezigcwele ekhaya lakhe.
May 31, 2007 ku-11: 30 PM
"Izithombe zami ezinamabhonethi zacekelwa phansi kudala, ngaphambi kwezinsuku zewebhu."
Ngakho-ke ngicabanga ukuthi angifanele ukuthumela omunye wenu emuva ezinsukwini zenu zeNavy egqoke ibhonethi? Ubudakwe kakhulu ukuba ungakhumbula kodwa ndoda, ubuyisigaxa ot
UJun 1, 2007 ngo-5: 34 AM
Okuthunyelwe okuhle, futhi uqinisile impela. Njengamanje ngisebenza kwi-PhD yami futhi ngiqala ibhizinisi ngasikhathi sinye, ngakho-ke ngiqinisile lapho ulingeka ukuba ulinge phansi isonto ngalinye phambi kwekhompyutha yami. Eminyakeni emibili eyedlule, mina nomkami (yebo, futhi ngishadile) sanquma ukuthi sizobeka eceleni isikhathi "esingaxoxiswane" sodwa (asiphuthelanga usuku lwangoLwesihlanu ebusuku eminyakeni emi-2), futhi ukuzivocavoca umzimba (ngivivinya okungenani ihora elingu-1/2 ngosuku). Nazi izinto ezimbalwa engizenzile ezisebenza kahle kakhulu. Mhlawumbe bazoba wusizo kunoma ngubani laphaya olwa nalokhu:
1. Ngizama ukugcina konke engikufundayo, bese ngikuprinta bese ngifunda ngisebhayisikili elimile ihora elingu-1/2. lokhu kudinga ukujwayela kancane, kepha a) kungigcina ngiphapheme ngenkathi ngifunda amaphepha esayensi futhi b) ibulala izinyoni ezi-2 ngetshe elilodwa (umsebenzi nokuzivocavoca)
2. uma ngibambeke enkingeni enamathelayo edinga ukucabanga, ngiphuma ngibaleka, ngivivinya umzimba ngokushesha ejimini, noma umdlalo osheshayo webasketball, futhi ngicabange ngqo ngaleso sihloko njengoba ngihamba. kuyamangaza ukuthi yimiphi imibono engatholwa ngokucabanga okuthile endaweni ehlukile, nangama-endorphin asebenza kancane.
3. Umeluleki wami uqhuba imihlangano yokuhamba ngezinyawo, futhi ngikwenzile lokhu ngezikhathi ezithile. kuhle ukuguqula umbono.
ps bewazi ukuthi uThomas Jefferson kubikwa ukuthi usebenzise amahora ama-2 ngosuku?
UJun 1, 2007 ngo-7: 45 AM
Leso iseluleko esihle. Ngikulungele ukubeka imigomo nokuyigcina - ngicabanga ukuthi ngizolandela eyakho lapha! Zonke izixazululo ezi-3 yizinto engingazenza ngokushesha… ikakhulukazi u-1 no-3. Ngizobe ngihamba isiyingi ntambama!
Ngiyabonga - futhi sikufisela inhlanhla kwi-PhD yakho. Lokho kuyimpumelelo emangalisayo. Ngilangazelela ukubuyela esikoleni ngithole i-MBA yami. Angiqiniseki ukuthi i-PhD isemisebenzini yini, kepha ngiyasithanda isikole kakhulu ukuthi kungenzeka ngokwemvelo. Sizobona ukuthi ikusasa likulethani!
Siyabonga ngogqozi namathiphu!
UJun 1, 2007 ngo-6: 10 AM
UDoug, bengihlala ngithanda ukufunda ibhulogi yakho kepha lena ingishaye kakhulu kimi. Ngizwe sengathi ubungichaza njengoba ngiyifunda. Ngicabanga ukuthi kuhle ukubona ukuthi kukhona abanye abafana nathi laphaya. Siyabonga nge-akhawunti ethembekile ngempilo yakho. Futhi sikufisela inhlanhla "ngekusasa"!
UJun 1, 2007 ngo-7: 38 AM
Ngiyabonga Patric! Angicabangi ukuthi nina bantu nizobona ushintsho oluningi lapha kubhulogi… luyobe luhlobene kakhulu nomsebenzi wami nemikhuba yami yezempilo engaphandle kwebhulogi. Uma lokhu okuthunyelwe kusiza abanye ukuthi bazibheke, kuyinto enhle leyo!
Vele, usuku lwami olusha luqale ngokugibela ibhayisikili lami lokuzivocavoca namhlanje ekuseni futhi belifile. Ngicabanga ukuthi kunebhethri phakathi lapho endaweni ethile elidinga ukushintshwa njalo eminyakeni embalwa ... kufanele ngilithole nje!
UJun 1, 2007 ngo-11: 02 AM
Kwenze! Ngabe uqaphele ukuthi uMike ushiye ibhayisikili lakhe elingagesi lapho izolo ebusuku! Besilokhu sihamba kamuva nje, futhi.
Jun 1, 2007 ku-1: 41 PM
Siyabonga ngokwabelana kakhulu ngawe. Ngicabanga ukuthi abaningi bethu bangazithola besesikebheni esisodwa! Lapho ngiqala i-blog yami, ngazithola sengibambeke kuyo ngagcina ngingabanaki abantu abahlala eduze kwami. Kwakulula "ukuhlala ekhaya" futhi "uxhunywe" kwikhompyutha nakubo bonke abangane bami abasha bokubhuloga (engibathanda kakhulu!). Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, bengiphuma ngiya emicimbini ethile yokuzijabulisa futhi ngenza nokuxhumana nabantu bendawo (lapha eSan Diego, kubaluleke kakhulu ukwenza oxhumana nabo bendawo!). Lokhu kunikeze amandla impela futhi kwangiphakamisela hhayi nje kuphela enhlalakahleni yami kepha nakwibhizinisi lami.
Angikaze ngibhulogi ngezimpelasonto, futhi njengoba kunzima, kwesinye isikhathi angivuli ngisho ne-PC yami ngezimpelasonto! Ukubeka udonga phakathi komsebenzi nempilo yomuntu siqu kubalulekile kimi.
Manje, Doug, phuma uye lapho ube nempelasonto emnandi! Ibhulogi yakho iyazamazama! 🙂
Jun 1, 2007 ku-3: 46 PM
“Usuku lwami olusha luqale ngokugibela ibhayisikili lami lokuzivocavoca namhlanje ekuseni futhi belufile. Ngicabanga ukuthi kukhona ibhethri lapho endaweni ethile elidinga ukushintshwa njalo eminyakeni embalwa? Kumele ngikuthole nje ”
Konke okunye kwehluleka, funda imanuwali 🙂
Cishe isendaweni lapho isibonisi sikhona… funa uhlobo oluthile lomnyango wesicupho.
Uma isimo sezulu sivuma, mhlawumbe hamba kancane kulobubusuku ... okungaletha igazi lakho.
Jun 1, 2007 ku-4: 15 PM
Unenhlanhla yokuthi awuhlali eduze kwami, sizoba nobhiya masonto onke noma mhlawumbe kaningi, kungenzeka size sifike ejimini! Ungumxhumanisi onekhono.
Jun 1, 2007 ku-4: 28 PM
Yingakho ngingezona izindaba ezingahambi kahle.
Kukhona njalo izindaba ezihamba phambili, ukuzama ukuqhubeka uphezu kwazo ngaso sonke isikhathi kuseduze ukuthi kwenzeke. Ukugxila ekufundeni, ekuthuthukiseni amakhono, nokuthi yini ongakususa kukho kunengqondo kakhulu esikhathini esizayo.
Jun 1, 2007 ku-4: 43 PM
Izeluleko Zamahhala Zempilo ezingama-25 zama-Computer Nerds ”.
Yiba khona okuhle ukuphela kwesonto okunempilo!
Jun 4, 2007 ku-4: 54 PM
Nakhu i- indawo enempilo yezingqungquthela zocingo> / A>.
UJun 7, 2007 ngo-5: 23 AM
Futhi esinye isixhumanisi:
Umhlahlandlela obonakalayo wokudla okulula okunempilo 🙂
UJun 7, 2007 ngo-7: 12 AM
Hummus. Yebo! Awekho amabha we-Snickers lapho? 😉
UJun 7, 2007 ngo-7: 45 AM
Bheka, mngane wami. Kukhona ifayela le- impendulo kini niyofuna.
Jun 2, 2007 ku-3: 33 PM
6/2/07 – munye!
Jun 2, 2007 ku-7: 49 PM
Ngithathe inja uhambo olude namuhla, kepha ngiyavuma, ngisebenze usuku lonke namuhla